Iphepha lesilivere elenziwe ngocingo abavelisi kunye nabanikezeli - China iicrylic Mirror Sheet Factory
Ukuxhamla ekubeni lula, impembelelo, ukumelana nokuqhekeka, ukubiza okungabizi kakhulu kunye nokuhlala ixesha elide kuneglasi, iishiti zethu zesipili ze-acrylic zinokusetyenziswa njengenye yezipili zemveli zeglasi kwizicelo ezininzi nakwimizi-mveliso. Njengazo zonke ii-acrylics, iishiti zethu zesipili ze-acrylic zinokunqunyulwa ngokulula, zigrunjwe, zenziwe zenziwe kunye ne-laser.
• Iyafumaneka kuma-48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830mm / 1220x2440mm) amashiti; ubungakanani besiko obukhoyo
Izitikha ze-DHUA Acrylic Mirror Wall zenziwe ngokugqibeleleyo kwimisebenzi yakho ye-DIY. Esi sipili sesincamathelisi senziwe ngeplastikhi ye-acrylic, umphezulu uyabonakalisa kwaye umva uneglu ngokwawo, kunokuba lula ukunamathisela nokususa ngaphandle kokwenzakalisa udonga lwakho, akusekho zixhobo zifunekayo ekumiseni. Umhombiso wodonga lwe-acrylic awunetyhefu, awunakunqanqazeka, ukhuseleko lwendalo kunye nokulwa nokubola.
• Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo okanye ubungakanani besiko
• Iyafumaneka ngesilivere, ect ect. imibala eyahlukeneyo okanye yesiko
• Iyafumaneka kwiheksagoni, isangqa esingqukuva, i-ect yentliziyo. iimilo ezahlukeneyo okanye zesiko
• Unikwa umboniso bhanyabhanya okhuselayo ngaphezulu, umthi wokuzimela
Ukuxhamla ekubeni lula, impembelelo, ukumelana nokuqhekeka, ukubiza okungabizi kakhulu kunye nokuhlala ixesha elide kuneglasi, iishiti zethu zesipili ze-acrylic zinokusetyenziswa njengenye yezipili zemveli zeglasi kwizicelo ezininzi nakwimizi-mveliso. I-Dhua acrylic mirror iyafumaneka kuluhlu lwemibala eqaqambileyo.
• Iyafumaneka kuma-48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830mm / 1220x2440mm)
• Iyafumaneka ngombala, igolide, igolide evusiweyo, ubhedu, imsi, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza, orenji, bomvu, yisilivere, tyheli, kunye neminye imibala yesiko.